War-Saxaafaadeed Laga Soo Saaray Shirkii Maaliyada Ee Maanta Ka Furmay Kismaayo | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA War-Saxaafaadeed Laga Soo Saaray Shirkii Maaliyada Ee Maanta Ka Furmay Kismaayo
Waxaa la soo gaba-gabeeyay shirkii wasiirada maaliyadda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah oo Maanta Kismaayo uga socday iyadoo wasiiradu ku heshiiyeen sii xoojinta dib-u-habaynta nidaamka maaliyadda iyo kobcinta dhaqaalaha dalka.
Shirkan ayaa waxaa si rasmi ah u furay Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, isla markaana waxaa ka qeyb galay Wasiir C/raxmaan Ducaale Beyle iyo Wasiirada maamu Goboleedyada dalka ka jira.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa raja wanaagsan ka muujiyay in dalka Somalia laga cafiyo daynta uu aduunku ku leeyahay si ay usoo noqoto sharaftii iyo hufnaantii hanaanka maaliyada dalka taas oo ah wax mudo ay sugayeen shacabka soomaaliyeed.
Shirka u dhexeeyay Wasiirka Maaliyada Xukuumada Soomaaliya iyo Wasiirada maamu Goboleedyada dalka ka jira ayaa waxaa laga soo saaray qodobo ay isku raaceen Madaxda.
Previous articleDhageyso:-Taliyaha Ciidanka Qeybta 60aad oo amar bixiyey.
Next articleProf Jawaari “Doorasho Qof Iyo Cod Ah Ma Dhici Karto”